Denby Studio Blue - Aldiss
Home » Products » Denby Studio Blue
25 products in
The Denby Studio Blue Chalk Medium Coupe Plate is part of the Denby Studio Blue tableware collection. The ranges combines four tonal glazes inspired by the colours and textures found in stone and minerals, combined to create a tactile collection which captures the essence of Denbys hand-crafting skills and textural glazes perfected over 200 years 21cm Stoneware Dishwasher safe Microwave safe Freezer...
The Denby Studio Blue Cobalt Coupe Dinner Plate is part of the Denby Studio Blue tableware collection. The ranges combines four tonal glazes inspired by the colours and textures found in stone and minerals, combined to create a tactile collection which captures the essence of Denbys hand-crafting skills and textural glazes perfected over 200 years 26cm Stoneware Dishwasher safe Microwave safe Freezer...
Denby Studio Blue Cobalt Medium Coupe Plate
The Denby Studio Blue Cobalt Medium Coupe Plate is part of the Denby Studio Blue tableware collection. The ranges combines four tonal glazes inspired by the colours and textures found in stone and minerals, combined to create a tactile collection which captures the essence of Denbys hand-crafting skills and textural glazes perfected over 200 years 21cm Stoneware Dishwasher safe Microwave safe Freezer...
Denby Studio Blue Flint Medium Coupe Plate
The Denby Studio Blue Flint Medium Coupe Plate is part of the Denby Studio Blue tableware collection. The ranges combines four tonal glazes inspired by the colours and textures found in stone and minerals, combined to create a tactile collection which captures the essence of Denbys hand-crafting skills and textural glazes perfected over 200 years 21cm Stoneware Dishwasher safe Microwave safe Freezer...
The Denby Studio Blue Pebble Medium Coupe Plate is part of the Denby Studio Blue tableware collection. The ranges combines four tonal glazes inspired by the colours and textures found in stone and minerals, combined to create a tactile collection which captures the essence of Denbys hand-crafting skills and textural glazes perfected over 200 years 21cm Stoneware Dishwasher safe Microwave safe Freezer...
Denby Studio Blue Chalk Cereal Bowl
The Denby Studio Blue Chalk Cereal Bowl is part of the Denby Studio Blue tableware collection. The ranges combines four tonal glazes inspired by the colours and textures found in stone and minerals, combined to create a tactile collection which captures the essence of Denbys hand-crafting skills and textural glazes perfected over 200 years 17cm Stoneware Dishwasher safe Microwave safe Freezer safe
The Denby Studio Blue Cobalt Cereal Bowl is part of the Denby Studio Blue tableware collection. The ranges combines four tonal glazes inspired by the colours and textures found in stone and minerals, combined to create a tactile collection which captures the essence of Denbys hand-crafting skills and textural glazes perfected over 200 years 17cm Stoneware Dishwasher safe Microwave safe Freezer safe
Denby Studio Blue Flint Cereal Bowl
The Denby Studio Blue Flint Cereal Bowl is part of the Denby Studio Blue tableware collection. The ranges combines four tonal glazes inspired by the colours and textures found in stone and minerals, combined to create a tactile collection which captures the essence of Denbys hand-crafting skills and textural glazes perfected over 200 years 17cm Stoneware Dishwasher safe Microwave safe Freezer safe
The Denby Studio Blue 4 Piece Cereal Bowl Set is part of the Denby Studio Blue tableware collection. The ranges combines four tonal glazes inspired by the colours and textures found in stone and minerals, combined to create a tactile collection which captures the essence of Denbys hand-crafting skills and textural glazes perfected over 200 years Set of 4 17cm Stoneware Dishwasher safe Microwave safe Freezer...
The Denby Studio Blue 4 Piece Medium Coupe Plate Set is part of the Denby Studio Blue tableware collection. The ranges combines four tonal glazes inspired by the colours and textures found in stone and minerals, combined to create a tactile collection which captures the essence of Denbys hand-crafting skills and textural glazes perfected over 200 years Set of 4 21cm Stoneware Dishwasher safe Microwave...
The Denby Studio Blue 4 Piece Rice Bowl Set is part of the Denby Studio Blue tableware collection. The ranges combines four tonal glazes inspired by the colours and textures found in stone and minerals, combined to create a tactile collection which captures the essence of Denbys hand-crafting skills and textural glazes perfected over 200 years Set of 4 13cm Stoneware Dishwasher safe Microwave safe Freezer...
The Denby Studio Blue Chalk Medium Ridged Bowl is part of the Denby Studio Blue tableware collection. The ranges combines four tonal glazes inspired by the colours and textures found in stone and minerals, combined to create a tactile collection which captures the essence of Denbys hand-crafting skills and textural glazes perfected over 200 years 25.5cm Stoneware Dishwasher safe Microwave safe Freezer...
The Denby Studio Blue Cobalt Medium Ridged Bowl is part of the Denby Studio Blue tableware collection. The ranges combines four tonal glazes inspired by the colours and textures found in stone and minerals, combined to create a tactile collection which captures the essence of Denbys hand-crafting skills and textural glazes perfected over 200 years 25.5cm Stoneware Dishwasher safe Microwave safe Freezer...
The Denby Studio Blue Flint Large Ridged Bowl is part of the Denby Studio Blue tableware collection. The ranges combines four tonal glazes inspired by the colours and textures found in stone and minerals, combined to create a tactile collection which captures the essence of Denbys hand-crafting skills and textural glazes perfected over 200 years 31cm Stoneware Dishwasher safe Microwave safe Freezer...
The Denby Studio Blue Flint Medium Ridged Bowl is part of the Denby Studio Blue tableware collection. The ranges combines four tonal glazes inspired by the colours and textures found in stone and minerals, combined to create a tactile collection which captures the essence of Denbys hand-crafting skills and textural glazes perfected over 200 years 25.5cm Stoneware Dishwasher safe Microwave safe Freezer...
Denby Studio Blue Chalk Round Platter
The Denby Studio Blue Chalk Round Platter is part of the Denby Studio Blue tableware collection. The ranges combines four tonal glazes inspired by the colours and textures found in stone and minerals, combined to create a tactile collection which captures the essence of Denbys hand-crafting skills and textural glazes perfected over 200 years 31cm Stoneware Dishwasher safe Microwave safe Freezer safe
Denby Studio Blue Cobalt/Pebble Ridged Mug
The Denby Studio Blue Cobalt/Pebble Ridged Mug is part of the Denby Studio Blue tableware collection. The ranges combines four tonal glazes inspired by the colours and textures found in stone and minerals, combined to create a tactile collection which captures the essence of Denbys hand-crafting skills and textural glazes perfected over 200 years 400ml Stoneware Dishwasher safe Microwave safe Freezer...
Denby Studio Blue Flint/Chalk Ridged Mug
The Denby Studio Blue Flint/Chalk Ridged Mug is part of the Denby Studio Blue tableware collection. The ranges combines four tonal glazes inspired by the colours and textures found in stone and minerals, combined to create a tactile collection which captures the essence of Denbys hand-crafting skills and textural glazes perfected over 200 years 400ml Stoneware Dishwasher safe Microwave safe Freezer...
The Denby Studio Blue Cobalt Large Jug is part of the Denby Studio Blue tableware collection. The ranges combines four tonal glazes inspired by the colours and textures found in stone and minerals, combined to create a tactile collection which captures the essence of Denbys hand-crafting skills and textural glazes perfected over 200 years Stoneware Dishwasher safe Microwave safe Freezer safe
Denby Studio Blue Flint Cheese Platter
The Denby Studio Blue Flint Cheese Platter is part of the Denby Studio Blue tableware collection. The ranges combines four tonal glazes inspired by the colours and textures found in stone and minerals, combined to create a tactile collection which captures the essence of Denbys hand-crafting skills and textural glazes perfected over 200 years 24.5cm Stoneware Dishwasher safe Microwave safe Freezer...
Denby Studio Blue Chalk Coupe Dinner Plate
The Denby Studio Blue Chalk Coupe Dinner Plate is part of the Denby Studio Blue tableware collection. The ranges combines four tonal glazes inspired by the colours and textures found in stone and minerals, combined to create a tactile collection which captures the essence of Denbys hand-crafting skills and textural glazes perfected over 200 years 26cm Stoneware Dishwasher safe Microwave safe Freezer...
Denby Studio Blue Flint Coupe Dinner Plate
The Denby Studio Blue Flint Coupe Dinner Plate is part of the Denby Studio Blue tableware collection. The ranges combines four tonal glazes inspired by the colours and textures found in stone and minerals, combined to create a tactile collection which captures the essence of Denbys hand-crafting skills and textural glazes perfected over 200 years 26cm Stoneware Dishwasher safe Microwave safe Freezer...
The Denby Studio Blue Pebble Cereal Bowl is part of the Denby Studio Blue tableware collection. The ranges combines four tonal glazes inspired by the colours and textures found in stone and minerals, combined to create a tactile collection which captures the essence of Denbys hand-crafting skills and textural glazes perfected over 200 years 17cm Stoneware Dishwasher safe Microwave safe Freezer safe
The Denby Studio Blue Pebble Coupe Dinner Plate is part of the Denby Studio Blue tableware collection. The ranges combines four tonal glazes inspired by the colours and textures found in stone and minerals, combined to create a tactile collection which captures the essence of Denbys hand-crafting skills and textural glazes perfected over 200 years 26cm Stoneware Dishwasher safe Microwave safe Freezer...
The Denby Studio Blue Pebble Medium Ridged Bowl is part of the Denby Studio Blue tableware collection. The ranges combines four tonal glazes inspired by the colours and textures found in stone and minerals, combined to create a tactile collection which captures the essence of Denbys hand-crafting skills and textural glazes perfected over 200 years 25.5cm Stoneware Dishwasher safe Microwave safe Freezer...